रोशना भन्छिन : मेरो साथ दिनु होला मेराे सास रहुन्जेल म लड्छु (भिडियो सहित) हेर्नुहोस … – पुरा पढ्नुहोस्……
रोशना भन्छिन : मेरो साथ दिनु होला मेराे सास रहुन्जेल म लड्छु (भिडियो सहित) हेर्नुहोस …
नर्भिक अस्पतालको २०१ नम्बर शैयाबाट न्यायको याचना गरीरहेकी उनी रोशना रामुदामु । अस्पतालको शैयाबाटै हाम्रो कार्यक्रममा स्काइप मार्फत नेपाल प्रहरीको गाडीले आँफुलाइए ठक्कर दिएर उपचारमा वेवास्ता गरेको बताएकी थिइन ।
पब्लिक युथ क्याम्पसमा व्याचलर तेस्रो बर्ष अध्ययन गरीरहेकी २० वर्षिय रोशना र उनका दाइ रोनस फागुन १७ गते होलीको दिन मोटरसाइकल सवार थिए । सिनामंगलमा उनीहरु सवार मोटरसाइकललाई कमल पोखरी प्रहरी वृतको बा १ ज ७३२२ नम्बरको सिआरभी भ्यानले ठक्कर दियो ।
जवान रमन कार्कीले चलाएको भ्यानको ठक्करबाट रोशनाको टाउको पिँठ्यु, कम्मर र खुट्टामा चोट लाग्यो भने उनका दाजुको हात भाँचियो । तत्कालै उनलाई ट्रमा सेन्टर लगिएपनि आइसियु कक्ष खालि नभएको भन्दै नर्भिक अस्पतालमा लगियो । अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च कस्ले र्हेने भन्ने विवादकै कारण सुरुमा त उनको उपचार नै भएन । तर पछि प्रहरीले अस्पताल प्रशासन छलफल गरेपछि करीब ५ घण्टा लगाएर उनको शल्यक्रिया भयो ।
अहिले उनलाई अस्पतालले घर फर्किन सक्ने बताएको छ । तर अस्पतालको खर्च कस्ले हेर्ने भन्ने समस्याकै कराण उनी अस्पतालबो बेडबाट निस्कीन सकेकी छैनन् ।
तर कमलपोखरी प्रहरी वृतका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुल दिप चन्दका अनुसार उपचार सुरु गर्नुपुर्व नै सवारी विमाबाट आउने रकम बाहेक अरु परिवारले नै व्याहोर्न मौखिक सहमती भएको थियो । चन्दका अनुसार विमाबाट घाइतेको अवस्थामा प्रति व्यक्ति बढीमा ३ लाख सम्म मात्रै प्रहरीले दिन सक्ने छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार अहिले सम्म उनको उपचारमा १० लाख बढी खर्च भैसकेको छ । यातायात व्यवस्था नियमावलीका अनुसार घाइते व्यक्तिको सम्पुर्ण उपचार खर्च सवारी धनले व्याहोर्नु पर्ने नियम रेहेको यातायात व्यवस्था विभाग तुलसीराम अर्यालले बताए ।
उनिसँगै घाइतेका दाजुको उपचार खर्चको बारेमा समेत प्रहरीले केही बोेलेको छैन । हरेक पल हाँसो ठ्ट्टा गरीरहने, अध्ययनशील उनि सबैकी प्यारी थिइन् । सबै जना होलीको रङमा रमाइरहेको बेला उनको भने जीवननै धरापमा परेको थियो ।
अहिले खतरामुक्त भएपनि विस्ताराबाट उठेर हिँढडुल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नो यो हालात, परीवारको मुहार र प्रहरीको यो व्यावहारले गर्दा उनलाई यो दुर्घटना सपना मात्रै भईदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।-सिधाकुराडटनेटबाट
Prevसमृद्धीको नारा सुनेर कुनै कमेडी शो हेरेभन्दा बढी हाँस उठ्दैनन् ? घोटाला गर्नेहरु चिनिदैनन् ? (भिडियो सहित)-सिधाकुरा जनतासंग
Next“डर होइन, जहाज उडाउन पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ” -पाइलट पेमा लामा (भिडियो सहित रमाइलो कुराकानी )
टंक बुढाथोकी र मेलिना राईको सुन्दै नाचौनाचौ लाग्ने गीत ‘कसरी कसरी’ लाई ३ करोड ११ लाख -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
बलिउड सुपर स्टार सलमानले लकडाउनको मा’रमा परेका २३ हजार मजदुरको खातामा पैसा हालिदिए
लाइभ कार्यक्रममै नेताले पत्रकारको गालामा थप्पड हानेपछि-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
प्रहरी भन्छ:- ‘डाक्टर केसीलाई संक्रम ण छ’, डाक्टर केसी भन्छन्, ‘म सं,क्रमित होइन’ (भिडि,यो सहित)